Warar dheeraad ah Iska hor imaad ka dhacay Magaalada Baladweyne – SBC
Warar dheeraad ah Iska hor imaad ka dhacay Magaalada Baladweyne
Ku dhowad 8 qof ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen iska hor imaad xalay ku dhexmaray gudaha Magaalada Baladweyne laba dhinac oo dhinac ka mid ahi uu ahaa Ahlusuna waljamaaca kaasi oo uu dhinaca kale weerarku ku soo qaaday.
Kooxaha weerarka ka dambeeyay ayaa waxaa ay ahaayeen xarakada mujaahidiinta Alshabaab iyadoona ku ekeeyay fariisinka ciidamada Ahlusuna ay ku lahaayeen Xaafada Xaawo Taako ee Magaaladaasi Baladweyne.
Inta laga warqabo dadkan geeriyooday ayaa la sheegay in ay ka soo kala jeedaan labada dhinac ee ay israsaaseyntu dhexmartay, waxaana dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in saaka ay soo keceen iyadoo meydadka ay yaaliin aagaga ay weerarku ka dhacay.
Saraakiisha Ahlusuna waljamaaca oo la hadlay warbaahinta Baladweyne ayaa sheegtay in weerarkii xalay ay kaga geeriyooday 1 qof halka inta kalena ay yihiin dhinacii kale ee weerarka ku soo qaaday waasida ay hadalka u dhigeene.
Sikastaba ha ahaatee weerada noocan ah ayaan aheyn kuwo ku cusub magaalada Baladweyne waxaana ay noqonayaan kuwo soo kordhay oo iminka ay bilaabatay in la beegsado fariisimada Ciidamada Soomaalida ah ee ku sugan magaalada Baladweyne halka dhowr jeer oo hore weerarka lala eegan jiray ciidamada Itoobiya ee Baladweyne ku sugan.
diyaarad joog hoose ku duulaysa ayaa dul heehaabaysay magaalo xeebeeda xafuunoo ka tirsan karkaar .lamana yaqaan ujeedada ka danbaysa , mana aha markii ugu horaysay ay noocaa samayaan..waxaana ay ka cabsi galisay oo ka sasisay caruurtii degaanka , fadlan u gudbi cidii wax ka qaban karta adoo mahadsan . waana arin dhib ku haysa degaanada somalia